प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा लैंगिक विभेद - UrjaKhabar प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा लैंगिक विभेद - UrjaKhabar
प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा लैंगिक विभेद
काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समावेशी बनाउन विद्युत् ऐन २०४९ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरियो । यही उद्देश्य अनुसार ‘विद्युत् विधेयक, २०६५’ तत्कालीन संविधानसभामा दर्ता भएको थियो । तर, यसले ऐनको रूप लिन सकेन । पटक–पटक छलफल भइरहे पनि नयाँ ऐन आउन सकिरहेको थिएन ।
हाल विद्युत् ऐन जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ । २०७६ कात्तिक १५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मान्त्रालयले वेभसाइट मार्फत १५ दिने सूचना जारी गरी सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो । उक्त सूचनाका अधारमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी लगायत सरोकारवाला संस्था तथा विज्ञले संयुक्त रूपमा सुझाव पेश गरेका थियौं । लामो समयपछि आउन लागेको ऐनले पक्कै देशको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा नयाँ फड्को मार्नेछ । लैगिक समावेशीकरण र सामुदायिक भावनाको रक्षा गर्ने विश्वास लिइएको थियो ।
ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा छलफलका अगाडि बढाइएको छ । तर, विधेयकको कुनै पनि दफा तथा उपदफामा लैंगिक समावेशीकरण सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । यसो हुँदा राज्यले लंैगिकमैत्री ऐन तर्जुमा गर्न कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । प्रस्तावित ऐनले महिलाको प्रभावकारी सहभागिता र भूमिकालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
संविधान २०७२ को धारा ३८ ले अङ्गिकार गरेको लैंगिक समावेशीकरणको सिद्धान्तप्रति यसपछि बनेका जुनसुकै ऐन–नियम पनि मौन रहन मिल्दैन । ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको कुनै भूमिका हुन सक्दैन ? महिलाहरूले लगानी र लाभमा सहभागी बन्ने अवसरमा सहजता ल्याउन यस प्रस्तावित ऐनले कुनै भूमिका खेल्नु पर्दैन ? अब यो बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य, २०३० लाई सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसको लक्ष्य हासिलतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । लक्ष्य ५ ले निर्धारण गरेको लैंङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी लक्ष्यप्रति उत्तरदायी बन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, सबै क्षेत्रका ऐन–कानुन नीति–नियम र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश ऐन–नियमले महिला सहभागितालाई समेटेको पाइँदैन । विद्युत् उत्पादन वितरण र प्रसारणमा महिला सहभागिता नगन्य छ । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा झन् शून्य नै छ ।
अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश ऐन–नियमले महिला सहभागितालाई समेटेको पाइँदैन । विद्युत् उत्पादन वितरण र प्रसारणमा महिला सहभागिता नगन्य छ । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा झन् शून्य नै छ । आर्थिक क्रियाकलापबम मुख्य क्षेत्र, राष्ट्रको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र हो । जसमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर तथा लगानीका सम्भावना छन् । तर, यस क्षेत्रमा सबै बर्गकोे समान पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।
विषेश गरेर महिला बर्ग आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । किनकि, राज्यका नीति–नियम र कार्यक्रम महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने सानादेखि ठूला निकायका निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता पाइँदैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, ग्रामीण विद्युतीकरण विनियम, ऊर्जा नीति, जलविद्युत् लगानी कम्पनीहरू, हाइड्रो पावर कम्पनी, माइक्रो हाइड्रो र सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरूको सञ्चालक समितिमा पनि महिला सहभागिता नगन्य छ ।
हाइड्रो पावरको सेयर लगानीमा महिलाको हिस्सा सुनिश्चित गर्न नसक्दा कम्पनीका सञ्चालकमा महिला सहभागिता प्रायः शून्य छ । ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन र लगानीका अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने रोजगारीमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
कुनै देशको समृद्धिको मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत (किलोवाट घन्टा) पनि हो । सरकारले आगामी दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाएर १५ सय किलोवाट घन्टा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको श्वेतपत्र २०७५ मा यो विषय स्पष्ट छ । यसका लागि समाजका सबै बर्गमा आधुनिक, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जाको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
ऊर्जा प्राविधिक विषय हो । यसमा महिलाको प्रभावकारी सहभागिताका हुन नसकिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी राज्यका नीति–नियम र कार्यक्रममै प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा ऊर्जामा आधारित उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न महिलाहरूको क्षमता विकास गरी रोजगारीको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । घरायसी काममा प्रयोगमा आउने विद्युतीय सामान तथा विद्युतीय चुलो जस्ता उपकरणमा महिला समुदायको पहुँच र क्षमता बढाउन सके कार्यबोझ कम हुन्छ ।
सरकारले लिएको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको लक्ष्य हासिल गर्न पनि ऊर्जा विकासमा महिला सहभागिता बढाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले बनाएको ऐन–नियमको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जा सम्बन्धी नीति–नियम बनाउने अभ्यास गर्न लागेको हुँदा यस्ता संघीय ऐन निर्माण गर्दा समाजका सबै बर्गको समान पहुँच र अवसर सिजना गर्ने समावेशी बन्नुपर्छ । जसमा हरेक निकाय र सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।